कोरियाले आफैंले बनाएको फा’इटर जेटको पहिलो नमुना तयार – Eps Sathi
कोरियाले आफैंले बनाएको फा’इटर जेटको पहिलो नमुना तयार
April 10, 2021 784
दक्षिण कोरियाले आफैंले बनाएको फा’इटर जेटको नमुना अनावरण गरेको छ। ‘केएफ-२१’ नाम दिइएको यो जेट कोरियाले आफ्नै लगानी र टेक्नोलोजीको प्रयोग गरि बनाएको हो। कोरियाको र’क्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको केएफ एक्स प्रोग्रामका प्रमुख जुङ ख्वाङ सुनले यो सफलता देशकै हवाइ उध्योगको लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने बताएका छन्।
कोरियाको दक्षिणि क्षेत्रमा रहेको साछन शहरमा यो जेट बनिरहेको थियो। दक्षिण कोरियाले सन् २०१५ देखि नै नयाँ पुष्ताको फाइ’टर जेट निर्माणका लागि जुटिरहेको छ। नयाँ जेट निर्माण गरि अहिले कोरियाले प्रयोग गरिरहेको कोरियन एअर फो’र्सको एफ-४ र एफ-५ मोडललाई विस्थापन गर्ने योजना रहेको छ।
कोरियाका राष्ट्रपति मुन जे इन साछनमा रहेको कोरिया एरोस्पेश इन्डष्ट्री पुगेर सुक्रबार केएफ २१ नामक फा’इटर जेटको पहिलो नमूना अनावरण गरेका हुन। इण्डोनेसियाका र’क्षा मन्त्री तथा कोरिया र इन्डोनेसियाका अन्य २३० सरकारी अफिसरहरु समेत यस समारोहमा सहभागी भएका थिए। इण्डोनेशिया यो प्रोजेक्टको पार्टनर रहेको छ।
“यो उपलब्धि कोरियाको र’क्षा मन्त्रालयका लागि एउटा ए’तिहासिक सफलता हो। कोरियाको एभियसन इन्डष्ट्रिका लागि समेत यो सफलताले ठूलो साथ दिनेछ।” समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति मुनले भनेका छन। फा’इटर जेटको निर्माण पूरा भएपछि धेरै संख्यामा जेट बनाइनेछ। यो के २१ जेट मल्टि रोल फाइ’टर वि’मान हो जसको निर्माण सन २०१६ बाटै सुरु गरिएको थियो। यो प्रोजेक्टमा इण्डोनेशियाले २० प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौता गरेको थियो। यस लगानी बापत निर्माण सम्पन्न भएपछि उसले ५० वटा जेट पाउनेछ।
यो जेटले अधिकतम ७ हजार ७०० किलोसम्मको लोड बोक्न सक्नेछ भने आकाशमै मि’साइल हान्न सक्ने गरि यो जेटको डिजाइन गरिएको छ। यो जहाज प्रतिघण्टा २ हजार २०० किलोमिटर उड्न सक्छ भने अधिकतम २ हजार ९०० किलोमिटरको उचाइमा उड्न सक्दछ। कोरिया एरोस्पेस इन्डष्ट्री कोरियाको एरोस्पेश क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने एकमात्र संस्था हो। कुल ८ बिलियन अमेरिकन डलर सहित अहिले यसले फा’ईटर जेट निर्माण गरिरहेको छ।
PrevBTS को ‘फेक लभ’ गीतले युट्युबमा पायो ९० करोड भ्युज
Nextकियाको नयाँ ब्राण्ड लोगो सहितको पहिलो कार बजारमा
म्यानमारको शैनिक कू बिरुध्द कोरियामा प्रदर्शन
कोरियामा आफ्नै घरको भाडामा बस्ने महिलाको भित्री कपडा चो’र्ने ८६ बर्षिय घरबेटी प’क्राउ
ग्रीनलाइफ हाइड्रोपावरको आइपिओ बाँडफाँड कहिले हुँदैछ? जान्नुस
१०० बर्षअघि कस्तो थियो कोरिया? हेरौं यि १२ वटा फोटोमा (10029)
कोरियामा खिसुक्सामा ढोका नलगाई सुत्दा कम्पनीको खोङजाङनिम छिरेर…. (10013)
कोरियामा एक स्कुल पढ्ने के’टीलाई रे’प गरेको आरोपमा नेपाली र बंगाली सहित ६९ जना कलेज बिध्यर्थी प’क्राउ (6767)
कोरियाले कामदार लाने प्रकृया सुरु, सिसिभिआइ फाराम खुल्यो (सूचनासहित) (5637)
हाइपर फण्ड डुबेको हल्ला चल्दै, खासमा भएको के हो? जानौं (5339)
खुल्यो कोरियन भाषा परीक्षा, हेरौं कहिलेबाट फाराम भर्ने? (4467)
हाइपर फण्ड ठगि योजना ‘पोन्जी’ को नयाँ स्वरुप (4023)
कोरियामा रहेका नेपालीहरुका लागि खुशीको खबर, कोरियाले जारी गर्यो भिजासम्बन्धी यस्तो नियम (3504)